Qalbi Dhagax ka hor maxaa yareeyay soo hadalqaadka ONLF - BBC News Somali
Daawo: Dhiibista Qalbi Dhagax qiil sharci ma leedahay?
Ra'iisulwasaarihii Itoobiya ee xiligaas Meles Zenawi wuxuu ku tilmaamay "xasuuq"
Meles wuxuu carabka ku adkeeyay "in uu ku dadaali doono in taasi oo kale aysan mardambe dhicin".
Doodda Qalbi Dhagax: Shan arrimood oo aysan dowladdu sharrixin
Ra'iisalwasaarihii geeriyooday Meles Zenawi oo marar badan xukuumaddiisa lagu eedeeyay in ay gacan bidixaysay deegaanka Soomaalida ayaa ballan qaaday in uu arrintaas wax wayn ka badali doono muddo shan sano gudahood ah.
"Gacanna ammaanka ayaan ku sugaynaa, gacanna horumarka ayaan kaga shaqaynaynaa" ayuu yiri Meles.
Image caption Sawir hore oo dagaalamayaasha ONLF ah
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedaysay ONLF iyo ciidammada gaarka ee Liyuu boolis inay geysteen dambiyo dagaal sida dilal baahsan, jirdil, kufsi iyo barakicin. Labudbua way beeniyeen eeeymahaasi.
Way adagtahay in arrimahasi si madax banaan loo xaqiijoyo maadama oo dowladda Itoobiya ay xaddiday hay'adaha gargaarka iyo suxufiyiinta.
Image caption Garoonka caalamiga ah ee Qabridahar
Eritrea oo ay taageero ka heli jireenna adduunka ayaa caddaadis saaray ka dib Markii ay Qarammada Midoobay ku eedaysay in ay qayb ka tahay ammaan la'aanta gobolka.
Hadda su'aasha taala waxay tahay qabashada Qalbi dhagax maxay uga dhigan tahay jabhadda ONLF.